China Electric nyundo, yemagetsi dhizaini chisel, SDS, Max, Hex, akanongedza chisel, sandara chisel, ina gomba uye mashanu gomba hexagonal chisel, pneumatic chisel fekitori uye vagadziri | Boda
Nyundo yemagetsi, yemagetsi dhizaini chisel, SDS, Max, Hex, yakanongedza chisel, flat flat chisel, ina gomba uye mashanu gomba hexagonal chisel, pneumatic chisel
Masezi anoshandiswa zvakanyanya munzvimbo yekuvaka, BOSENSA chisels anotumirwa kune vese pasirese, zvakagadzirwa nehunyanzvi hwekugadzira. Isu tine yakasimba kutonga pamusoro peZVIMWE zvigadzirwa. Matekinoroji edu anogara achivandudza zvigadzirwa zvedu.
Fekitori yeBosenda iri muguta rekugadzira michina muChina, uko kugadzirwa kwemachizi, mabheji uye mahaha emasaha zvichingodaro zvine zvazvakanakira kutenderera nyika. Basa redu rechisel uye kutsvaga kwedu kugona kwechigadzirwa kunoita kuti tekinoroji yekugadzira chisel igare yakura uye irambe ichikwikwidza mumusika wezvishandiso.
Bosenda dzakateerana dzechisi dzinozivikanwa zvakanyanya mumusika wepasi rose, bhizinesi riri kuramba richienderera.Vatengi vedu vanobva kunyika zhinji pasi rese, kubva kuNorth neSouth America, nyika dzeEU, East Eu nyika, Est Asia neMiddle East. Ticharamba tichishandisa tekinoroji yedu yakura kugadzira zvigadzirwa zviri nani kuzadzikisa zvido zvemusika.
BOSENDA Electric Hammer Chisel / Chisel, ine 40Cr zvinhu uye kabhoni simbi, 40CR inogara yakasimba mukushandisa, iyo inokodzera zvidhinha madziro, samende madziro, concretes nematombo. Iwo anobata ari MAX shank, SDS shank, Hex shank, pneumatic chisel uye 65A chinyorwa uye zvichingodaro, izvo zvese zvine akanongedzera, akapfava uye anowedzera chisisi. Pasuru inowanzo iri mupurasitiki chubhu, zvakatarwa zvinodiwa zvinogona kuve zvinoenderana maererano nezvinodiwa nevatengi.
Isu tinoita OEM neODM, kurongedza kunogona kugadzirwa.
BOSENDA Chisels vanopfeka kuramba kwakasimba, kunogara mukuita kwehupenyu, zvigadzirwa zvakagadzirwa zvakaita kuti kuomarara kwechizere kuve pamberi pemazhinji emasisita emusika.
Chisisi inogona kushandiswa mumakomba ari pamadziro nekongiri, uye kucheka nekugomera. Isu tinopa akateedzana akazara emhando dzakasiyana senge yakanongedzwa chisel, diki diki chisel, hombe sandara chisel, semicircular chisel, yakapinza groove chisel, nezvimwe.
Kureba kwechisi kunogona kutemerwa zvichienderana nezvinodiwa nemutengi.
Kuti uwane rumwe ruzivo rwakadzama, inzwa wakasununguka kuti utaure nesu.
Pashure: Kuvesa matatu akanongedzwa kuboora, kuveza huni, kuveza gomba rinovhura, ese marudzi ekuboora
Zvadaro: Daimondi kucheka chipande, nedhaimani akaona reza, zvedongo Tile achicheka nereza, machena achicheka reza, girenayiti kucheka chipande, akaona reza
Kuveza mativi gomba chibooreso, Wood chibooreso ikakuruma, W ...
Four paburi uye mana kumucheto kuveza broach bii ...
Kutema huni router bits, stright shank, huni ...
Electric sando chibooreso ikakuruma, kongiri chibooreso ikakuruma, ...
Tip Tap, Chip Groove Tap, Yakatwasuka Flute Machine ...